Uvimba oovimba abalungeleyo-Ilungelo laseMelika lokwazi
Abasebenzisi bakaCargill's GMO Stevia Hoodwinks
ezaposwa ngomhla Novemba 20, 2019 by UStacy Malkan
Ingqungquthela yokutya yamazwe ngamazwe uCargill Ukunyusa umgangatho wentengiso yeswiti yayo enencasa yemfuza, i-EverSweet, kwiziko elitsha lemveliso yezigidi ezingama-50 eziqale ukusebenza kule veki eBlair, eNebraska. Esi sityalo "siza kuvelisa i-EverSweet eyaneleyo ukuswiti izigidi ezininzi zeebhotile / iinkonkxa zeziselo ezihlwahlwazayo okanye ukuhanjiswa kweyogathi inyanga nenyanga," ngokutsho kwesithethi seCargill.
Isityalo esitsha seCargill seGMO stevia
UCargill uthengisa indawo yakhe entsha ye-stevia njenge “ezingezizo ezokwenziwa. ” Ithetha ntoni le nto? Abathengi abacofa kwifayile ye- unikezwe ikhonkco kukhululo lweendaba aluyi kufumana mpendulo ngqo. Iphepha lewebhu lijija ngokwamaqhina lizama ukuchaza inkqubo entsha, ebandakanya igwele lobunjineli bemfuza ukuguqula iimolekyuli zeswekile zibe yinto elingisa incasa ye-stevia, njenge "ndlela yakudala yeenkulungwane" - ngaphandle kokukhankanya ubunjineli bemfuza okanye i-genetic modified Izinto eziphilayo (ii-GMO) ezazisetyenziselwa ukwenza imveliso.
Cargill uxelele i-Star Tribune ayithengisi i-EverSweet njenge "yendalo" -ngoko "ingezizo ezokuzenzela" kunjalo. Ukuqhatha akupheli apho.
UCargill, owayesakuba liqela lezeNgqobhoko uHenry Waxman wabiza igama elithi “yeyona nkampani imbi emhlabeni"Kwi-2019 ye (phakathi kwezinye izinto)" ukunyanzelisa okuphindaphindiweyo kokuma kwindlela yenkqubela phambili kuzinzo, "iimarike ze-EverSweet njenge" ezinzileyo "ezivelisiweyo. Elo bango, njengoko sixele Inqaku likaHuffington Post lika-2017, iphekwe ziingcali zePR ezinikwe umsebenzi wokuqonda ukuba zenziwa njani izithako eziveliswe ngevat ezinesandi esithandekayo kubathengi abafuna ukutya okutsha, kwendalo ngeelebheli ezicacileyo, ezilula.
Imibutho kunye nabatyali zimali ngokubona kwabo kusetelwe ukuhambisa i-stevia- kunye nezinye ixabiso eliphezulu izityalo ezisekelwe kwizityalo kunye neziqholo -Ngaphandle kweefama ukuya kwiilebhu ezadibana kwi Iseshoni yesicwangciso ka-2014 ukuxoxa ngendlela yokuthengisa le ngcamango kubathengi. Abacwangcisi be-PR entlanganisweni bacebisa ukuphepha amagama anje nge "synthetic biology" kunye "ne-genetic engineering" (eyoyikeka kakhulu, ukubuyela umva kakhulu), kwaye bacebisa ukuba bahambe neenkcazo ezingacacanga ezinje ngo "ukubila kufunyenwe" kunye "nendalo ngokufanayo." Bacebisa ukuba kugxilwe kwiintatheli kumabali ethemba kunye nezithembiso, nokwenza abaphembeleli bokutya "bazive ngathi sonke sihamba phantsi kwebhanile enye" ​​ukuzinza kokutya, ukwenza izinto elubala kunye nolawulo lokutya.
Iinkampani kunye nabathengi abakhathalele ngokwenene malunga neekhonsepthi baya kuba benza kakuhle ukujonga ngasemva kwehypes. Kwisakhelo sikaCargill, u-Eversweet "uzinzile" kuba ususa imveliso emhlabeni. Kodwa ayenzi njalo; yenkampani entsha yezigidi ezingama-50 zeedola "indawo yokubila," emi entliziyweni ye I-GMO Roundup ikulungele Ilizwe lombona, liya kuxhomekeka kwezi zityalo zichithwe zinambuzane - okanye omnye umthombo weswekile okhuliswe emhlabeni - ukondla igwele kwindawo yayo yokwenza i-EverSweet. Ukukhutshwa kwayo kushicilelo kusetyenziswa amagama azinzileyo ozinzo kodwa kungabonisi zinkcukacha zokuxhasa amabango. Sifikelele kwinkampani ukubuza ezinye iinkcukacha; akukho mpendulo okwangoku kodwa siza kongeza naziphi na izimvo esizifumanayo.
Okwangoku, amafama akumazwe afana neParaguay ebelima ngokuzinzileyo i-stevia kwizizukulwana ngezizukulwana, kwaye benza impilo elungileyo ngokulima isityalo, inika ingxelo yeQela le-ETC. IQonga lezoQoqosho leHlabathi phawula kuvavanyo lwemingcipheko ekhokelayo yelizwe jikelele yokuba “ukuveliswa kweendlela ezinamaxabiso aphantsi, zokwenziwa ngaphandle kwexabiso lezolimo ezithunyelwa kumazwe angaphandle… kungazinzisa ngesiquphe uqoqosho olusengozini ngokususa umthombo wengeniso abathembele kuwo abalimi.” Ngapha koko, amafama ahluphekileyo akhuthazwe ngenkuthalo ukuba atyale imali kwi-stevia, kuba ukulima kwayo kunokunceda ukugcina i-ecosystem kunye neyodwa.
Kubathengi base-US, kuya kusiba nzima ukunqanda ukutya okutsha kofuzo Ezithe cwaka zenza indlela yazo ezivenkileni ngaphandle kokubhaliweyo ngokucacileyo. I-organic eqinisekisiweyo okanye engeyiyo eye-GMO eqinisekisiweyo ihlala iyimigangatho emibini ezinikeleyo ukuthintela i-biology eyenziweyo kunye nezithako zemfuza.
Ngokubhekisele kwiCargill, yeyona nkampani inkulu yabucala e-US, inkulu nangaphezu kwe-Koch Industries eyaziwayo, kwaye i-footprint yayo isasazeka kwihlabathi liphela, utshilo owayesakuba ngu-congressman Waxman, ongusihlalo we-Mighty Earth campaign, ngoJulayi wabo ingxelo ebiza uCargill yeyona nkampani imbi kakhulu kwihlabathi. “Siyaqonda ukuba eli libango elinobungqina. Kukho, yeha, iinkampani ezininzi ezinokulwela eli wonga lithandabuzekayo. Kodwa le ngxelo ibonelela ngobungqina obubanzi nobunyanzelisayo bokuyixhasa… Kwinkqubela yam yeminyaka engama-40 kwiCongress, ndathatha uluhlu lweenkampani ezazisenza izinto gadalala. Ndizibonele ngokwam ifuthe eliyingozi lamashishini angazisi iindlela zokuziphatha kuwo ukuba asebenze. Kodwa uCargill ugqamile. ”
Ngaba ukulungele ukutshangatshangiswa ngokutsha kokutya okuyimfuza? NguStacy Malkan, iphephancwadi i-CommonGround (3.16.2018)
Dibana neStevia eNtsha! Ii-GMOs 2.0 Nxiba Impumelelo, NguStacy Malkan, Huffington Post (6.15.2017)
Ukubheja okungalunganga kwi-Biology ye-Synthetic: I-Eversweet kaCargill ikhuphisana namafama kunye nabalahlekisi abathengi, Iqela le-ETC (11.11.2015)
Icandelo le-Biotech lipheka izicwangciso ze-PR zokufumana ukuba siginye ukutya kwe-biology, NguDana Perls, Abahlobo Bomhlaba (5.22.2014)
GMO Cargill, Nganeno, GMO, UHenry Waxman, Umhlaba onamandla, Umjikelo ulungile, stevia, biology yokwenziwa, Inkampani eyiNtloko kwihlabathi